Jilayaasha fanka legdinta weyn | Ragga Stylish
Jilayaasha fanka legdinta weyn
Alicia tomero | | Waqtiyada firaaqada
In yar ayaa ka mid ah jilayaasha fanka legdinta leh laba tayo oo gaar ah taasina waxay ka dhigeysaa inay xirfad sare ku leeyihiin goobahooda. Iyagu waa jilaayaal matalayay aflaamta waaweyn isla markaana hal ku dhigoodu ahaa halyeeyada iyo khubarada weyn ee fanka dagaalka.
Jilayaasha fanka dagaalka waxay leeyihiin tayo ay ku ciyaaraan doorka filimka oo dhan, inta badan uma baahna nin stuntman ah si ay u sameeyaan muuqaalahooda waxqabad ee u gaarka ah. Mar dambe uma baahnid waxyeellooyin gaar ah oo weyn oo haddii aad u baahatid, waa inaad dib u cusbooneysiiso oo aad muujiso muuqaalo cajiib ah
Shineemadu ma awoodin inay iska caabbiso racfaanka isku darka fanka dagaalka iyo filimadiisa. Farshaxanka legdintu waxay leeyihiin farsamo sax ah iyo nidaam difaac oo gaar ah oo la mideeyay, dhammaantoodna waxaa lagu beeray falsafad barasho iyo dabeecad dib u socota sannado badan oo Qarniyadii hore ah. Eeg jilayaashan oo la sameeyay iyo ku ciyaarida jilayaalkiisa waa mid mudan in lagu amaano.
1 Jilayaasha fanka dagaalka
Jilayaasha fanka dagaalka
Liiska jilayaasha xirfadaha fanka legdinta iskama indha tiri karno inaan ku darno Bruce Lee weyn. Awoodda uu u lahaa Kung Fu waa mid cajiib ah maadaama uu waqti iyo dadaal badan u huray hanashada farshaxankan, xitaa abuurista tiisa gaarka ah: Jeet Kune Do "waddada feedhka lagu qabanayo". Wuxuu abuuray filimo waa weyn sida "The Green Hornet", "Hawlgalkii Maskaxda" iyo "Cadhada Bariga".
Wuxuu ku guuleystey qeybtiisa Wushu kooxda Beijing. Waqtigan xaadirka ah wuxuu ka mid ahaa filimka Mulan, laakiin markuu shaqeyn waayo wuxuu ka dhacaa sumcadda si uu u sii wado caqiidadiisa Buddhist. Wuxuu jilay filimo aad muhiim u ah sida "Dragon Fight", "The Master", "The Legend 2", "Fist of Legend", "The Legend of the Red Dragon" or "The Dragon's Seefta". Mana ilaabi karno filim muhiim ah sida "Romeo waa inuu dhintaa", "Hubka wax dila" ama "Calooshood u shaqeystayaasha".
Mid ka mid ah jilayaasha caanka ah ee hubaal qof walba ogyahay inuu jilayo taxanaha tv Walker, Texas Ranger. Chuck Norris wuxuu u istaagay xirfaddiisa inuu hibo weyn u leeyahay fanka dagaalka, tan iyo wuxuu ku takhasusay Feerka, Karate, Judo, Xiriir Buuxa wuxuuna ku tababbaray Baraasiil Jiu-jitsu. Wuxuu sidoo kale abuuray Chun Kuk Do. Taekwando wuxuu noqday qofki uguhoreeyay ee reer galbeed ah ee qaata darajada sideedaad ayeeyada suunka madow. Filimkiisii ​​ugu caansanaa wuxuu ahaa doorkiisa Dagaalkii uu la galay Bruce Lee.
Isagu waa mid kale oo ka mid ah jilayaasha caanka ah ee filimada shaashadda weyn ku jira. Wuxuu kaqeyb qaatay in kabadan boqol iyo konton aflaamta ficil ee doorka hogaaminta, doorarka taageera iyo xitaa stuntmen Waana in jilaagan weyn uusan ka baqeynin inuu turjumo muuqaalkiisa qatarta weyn leh. Wuxuu lahaa nasiib daro in midkood uu ku dhamaado koronto, miskaha oo kala go'ay iyo jahwareer weyn oo ka jira dhabarka. Waa macallin weyn oo Kung Fu ah wuxuuna ka soo muuqday filimo caan ah sida "Tuxedo", "Boqortooyada Xaaraanta ah", "Rush Hour" ama "Way adag tahay in la dilo".
Jilaagan lagu naaneyso "Murqaha Brussels" wuxuu ciyaaray doorar dhowr ah sida halyeeyada filimada badan waxayna u adeegtay qoraa, soo saare iyo filim sameeye. Isagu waa khabiir ku takhasusay farshaxanka kala duwan: karate-do (2nd dan black belt), kickboxing iyo xiriir buuxa. Doorkiisa oo dhan waxaan ku aragnaa isaga oo ciyaaraya nin adag oo guuleysta dumarka waaweyn. Waxay caan ku noqotay sanadkii 1984 aflaamta sida "Xiriir dhiig leh" iyo "Kickboxer", in kastoo aan hubno inaan ku garaneyno isaga aflaam badan oo caan ah sida "Askariga Universal", "The White Dragon" iyo "The Mercenaries 2".
Waa jilaa aflaam ficil ah iyo khabiir ku ah fanka dagaalka sida aikido, kenjutsu iyo karate-do. Abaabulkeeda marka la duubayo muuqaalada fanka legdinta waxay siineysaa waxyaalaha gaarka ah ee aan lagu xad-gudbin, maxaa yeelay waxay ka kooban tahay dhaqdhaqaaq badan oo qalalan oo fiiqan iyo laad af badan. Waxaa looga yaqaan filimada sida "Digniinta ugu badan", "Way adag tahay in la dilo", "Dhul khatar ah" ama "Qarka u ah dhimashada.
Wuxuu caan ku yahay aflaamta fanka iyo tacabirka wuxuuna had iyo jeer ku sifoobay doorka nin adag. Wuxuu ku fiicnaaday dhanka farshaxanka dagaalka iyo feerka, wallow uusan waligiis ku guuleysan cinwaan shaqsiyeed noocaan ah. Waa wax layaableh qaabkeeda waxaana ka soo muuqday filimaan aad u cajiiba sida "The Transporter", "The Expendables", "War" or "Wild Card".
Kama tagi karno jilayaal badan oo kale kuwaas oo si weyn uga qeyb qaatay aflaam caan ah oo caan ah. Xirfadooda ku takhasusay takhasuskaan iyo qaybahaan iyo waliba cinwaankooda, ayaa ka dhigay in badan oo ka mid ah inay ku guuleystaan ​​kaalintooda ayna jeclaadeen daawadayaal badan. Waa kiiska Lorenzo Lamas sawir qaade taasi waxay guuleysatay dabayaaqadii 80-meeyadii, kuwii caanka ahaa Wesley Snipes filimada caanka ah sida "Blade", Bolo yeung isagoo u taagan doorka gacan ku dhiigle weyn ee filimada sida "Dhiigga Isboortiga", Dolpn Lundgren, Donnie Yen, David Carradine ama atariishada Ronda Rousey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Jilayaasha fanka legdinta weyn
Nolosha ugu fiican habeenkii